ပွဲဦးထွက်မှာ (၁)စက္ကန့်ပဲ ကစားခဲ့ရတဲ့ မန်စီးတီးလူငယ်ကစားသမား ဂိုးမက်စ်
ပွဲဦးထွက်မှာ (၁)စက္ကန့်ပဲကစားခဲ့ရလို့ အမြန်ဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့တဲ့ မန်စီးတီးလူငယ်ကစားသမား Gomes
7 Aug 2018 . 4:11 PM
မန်စီးတီးလူငယ်ကစားသမား ကလော်ဒီယိုဂိုးမက်စ် Claudio Gomes ကတော့ စီနီယာအသင်းနဲ့ ပွဲဦးထွက်မှာပဲ ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် ဘယ်သူမရ မရဖူးသေးတဲ့ စံချိန်ကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ စံချိန်က ရယ်စရာတော့ကောင်းပါတယ်။ ပထမဆုံးပွဲဦးထွက်(Debut)မှာ (၁)စက္ကန့်ပဲ ကစားခဲ့ရလို့ပါပဲ။ အသက်(၁၈)နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဂိုးမက်စ်ဟာ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ ကွန်မြူနတီဒိုင်းပွဲတုန်းက ပွဲချိန်(၉၅)မိနစ်မှာ နောက်ခံလူ ဂျွန်စတုန်းစ် John Stones နေရာ လူစားဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့တယ်။
ဘောလုံးတောင် ထိဖို့နေနေသာသာ၊ ကွင်းထဲကို ခြေလှမ်းချရုံရှိသေး ဒိုင်လူကြီးက ပွဲပြီးခရာမှုတ်ခဲ့တာကြောင့် ဂိုးမက်စ်တစ်ယောက် ရီရမလို၊ ငိုရမလို။
ဂိုးမက်စ်ဟာ နည်းပြဂွါဒီယိုလာ Guardiola လက်ထက် စီနီယာအသင်းအတွက် ပထမဆုံးကစားခွင့်ရခဲ့တဲ့ (၆)ဦးမြောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင် ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် ပွဲဦးထွက်မှာ (၁)စက္ကန့်ပဲကစားခွင့်ရသူအဖြစ်ပါ စံချိန်တင်ခဲ့တယ်။ လူမှုကွန်ရက်တွေမှာတော့ ဂိုးမက်စ်ကို စနောက်နေကြပြီး Dave Calaz လို့ အမည်ရတဲ့ Twitter Account ပိုင်ရှင်က “ကလော်ဒီယိုဂိုးမက်စ်နော်၊ (၁)စက္ကန့်ပဲကစားတယ်၊ ဖလား(၁)လုံးရတယ်။ တကယ့် Legend ပဲ”လို့ နောက်ပြောင်ခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော . .ဂိုးမက်စ်ရဲ့ နေရာမှာဆိုရင် ဘယ်လို ခံစားရမလဲ . . .
ပှဲဦးထှကျမှာ (၁)စက်ကနျ့ပဲကစားခဲ့ရလို့ အမွနျဆုံးစံခြိနျတငျခဲ့တဲ့ မနျစီးတီးလူငယျကစားသမား Gomes
မနျစီးတီးလူငယျကစားသမား ကလျောဒီယိုဂိုးမကျဈ Claudio Gomes ကတော့ စီနီယာအသငျးနဲ့ ပှဲဦးထှကျမှာပဲ ဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ ဘယျသူမရ မရဖူးသေးတဲ့ စံခြိနျကို ရယူနိုငျခဲ့ပါပွီ။ ဒါပမေဲ့ သူ့ရဲ့ စံခြိနျက ရယျစရာတော့ကောငျးပါတယျ။ ပထမဆုံးပှဲဦးထှကျ(Debut)မှာ (၁)စက်ကနျ့ပဲ ကစားခဲ့ရလို့ပါပဲ။ အသကျ(၁၈)နှဈသာရှိသေးတဲ့ ကှငျးလယျလူ ဂိုးမကျဈဟာ ခယျြလျဆီးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ ကှနျမွူနတီဒိုငျးပှဲတုနျးက ပှဲခြိနျ(၉၅)မိနဈမှာ နောကျခံလူ ဂြှနျစတုနျးဈ John Stones နရော လူစားဝငျကစားခှငျ့ရခဲ့တယျ။
ဘောလုံးတောငျ ထိဖို့နနေသောသာ၊ ကှငျးထဲကို ခွလှေမျးခရြုံရှိသေး ဒိုငျလူကွီးက ပှဲပွီးခရာမှုတျခဲ့တာကွောငျ့ ဂိုးမကျဈတဈယောကျ ရီရမလို၊ ငိုရမလို။
ဂိုးမကျဈဟာ နညျးပွဂှါဒီယိုလာ Guardiola လကျထကျ စီနီယာအသငျးအတှကျ ပထမဆုံးကစားခှငျ့ရခဲ့တဲ့ (၆)ဦးမွောကျဖွဈခဲ့တဲ့အပွငျ ဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ ပှဲဦးထှကျမှာ (၁)စက်ကနျ့ပဲကစားခှငျ့ရသူအဖွဈပါ စံခြိနျတငျခဲ့တယျ။ လူမှုကှနျရကျတှမှောတော့ ဂိုးမကျဈကို စနောကျနကွေပွီး Dave Calaz လို့ အမညျရတဲ့ Twitter Account ပိုငျရှငျက “ကလျောဒီယိုဂိုးမကျဈနျော၊ (၁)စက်ကနျ့ပဲကစားတယျ၊ ဖလား(၁)လုံးရတယျ။ တကယျ့ Legend ပဲ”လို့ နောကျပွောငျခဲ့ပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရော . .ဂိုးမကျဈရဲ့ နရောမှာဆိုရငျ ဘယျလို ခံစားရမလဲ . . .